Kutheni i-oda yeeVenkile ezivela kuthi? - MOLONG OONO TATTOO CO., LTD
Thumela umbuzo, ukuthengisa kwethu kuya kuqhagamshelana nawe kwangoko kwaye sikunikeze ngenkonzo yesigulana kunye nenobuhlobo. Samkela ukhetho olukhuselekileyo lokuhlawula i-PayPal. Siyayamkela intlawulo yeBhanki kunye nentlawulo yeNtshona Union. Qalisa namhlanje!
Sisebenzisa i-DHL, i-FEDEX, i-UPS kunye ne-EMS ukuthumela iipakeji zethu ezincinci. Ukusuka kwindawo yokugcina iimpahla yaseMOLONG TATTOO SUPPLY ukuya kwiindawo eziphambili eMntla Melika, eYurophu, eAsia nase-Australia, ukuhambisa kuphela kuthatha iintsuku ezi-3 ukuya kwezi-7 zokusebenza. Ngomoya nangolwandle ziyafumaneka nazo!
Ukhuseleko yeyona nto iphambili kwi-MOLONG TATTOO SUPPLY. Siqinisekisa ukhuseleko lwayo yonke idatha yentengiselwano. Sizama konke okusemandleni ethu ukwenza iimpahla zakho zihanjiswe ngokukhuselekileyo ngexesha. Senza ulwazi lwakho lokuthenga luyimfihlo. Khusela ngokufanelekileyo kuthi!